Vhidhiyo: Microsoft Windows Phone 7 Yekupedzisira Preview | Martech Zone
Nezuro pa Mubatanidzwa, takazoona yekutanga kuratidzwa kweruzhinji rwekupedzisira vhezheni yeMicrosoft Windows Phone 7. Heino vhidhiyo yeiyo Windows Phone 7 kuratidzira.
Windows Foni 7 ine yakasarudzika mushandisi ruzivo kusiyana nezvimwe zvakajairika mushandisi maficha ayo anosanganisira maikoni, yavo yekufambisa ndeye block inotyairwa. Sezvo maapplication achigona kuvakwa muNET neSilverlight, chero mushambadzi weMicrosoft kunze uko anogona kukudziridza foni kana kutumira maapps avo kana mitambo zviri nyore kufoni. Icho chihombe chibvumirano sezvo paine mutoro wevatambi veMicrosoft kunze uko - hapana mubvunzo uchaona huwandu hukuru hwezvishandiso zvebhizinesi zvakavakirwa mudziyo.
Mukurukuri anotsanangura kuti maapplication anotenderwa, asi kuburikidza neyakaomesesa maitiro pane ayo Apple anoshandisa. Ivo vanotenda kuti ichave kumwe kunhu pakati pesango kumadokero kweDroid uye nekunyanyisa kudzora maitiro eApple. Tarisa uone zvaanotaura panguva dza9: 25… oops!
Tags: Nokiamahwindowindows phonewindows foni 7
Drip Kushambadzira Chikamu chechipiri: Usayamwa.